Ruvara rwemint mune remukati - Confetissimo - yevakadzi blog
Confetissimo - blog revakadzi
Fesita, chimiro, runako, hukama, imba
Kudya uye maswiti
Mutambo uye chimiro
Mhando dzevakadzi chimiro
Manicure uye pedicure
kuru » Kuvandudza Kusha » Decor
Mint mavara mukati mekunze
Mumvuri wega wega une mhedzisiro dzakasiyana pane yekuziva kwevanhu. Vamwe vanomutsa chishuvo, vamwe vanonyaradza uye vanopa pfungwa yerunyararo. Ndokusaka zvichikosha kwazvo kuti utarise izvi nuance paunoronga imba yako. Mushure mezvose, zvinodikanwa kufunga pamusoro pekuti kwete chete ruvara ruchazove madziro, asiwo fenicha, midziyo uye akasiyana-siyana ekushongedza trifles. Izvi zvinogadzira mamiriro anotonhorera ayo achafadza kwemakore mazhinji. Ngatitaurei nhasi nezve zvisingaenzaniswi kune yakajairika yemukati - iyo inozorodza mint.
Mint yemavara maficha
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mumvuri pachawo hauna chekuita nemint. Iyo haina kusvibirira yakadaro, panzvimbo pezvo, yakafanana ne pastel bhuruu, aquamarine, mumvuri wegungwa reafungwa uye turquoise.
Kana zviri zvekunzwa, iyo mint ruvara runopa kureruka, kupfava uye rugare. Mukuwedzera, inoita kuti chero kamuri riwedzere kuwoneka uye rakajeka. Nekudaro, inowanzosarudzwa kugadzirwa kwemakamuri madiki kana semuvara wakapesana wemukati weimba. Nenzira, kusiyana nemamwe mimvuri, iyo mint chivara chakanyatsogadzikana uye chinogona kusarudzika mukamuri imwe neimwe, kutanga kubva mukicheni uye kupera neiyo corridor.
Chinhu chinotevera chakakoshesa kucherechedza ndiko kusanganiswa kwerudzi rwemint nemumvuri akasiyana. Ehe, zvinotaridzika zvakanyanya kubatsira nemumvuri wechena uye beige. Nekuda kwekubatanidzwa uku, mukamuri rinotarisa rakanyatsonaka uye rakachena.
Ruvara rwe mint runowanzoshandiswa sechirevo. Semuenzaniso, kushongedzwa kwemba mune nhema uye chena. Inotaridzika chaizvo inotaridzika. Uye zvechokwadi, iyo mint ruvara inosangana zvakakwana neyese pastel renji.
Ruvara rwependi mumba yekutandarira yemukati
Sezvataurwa pamusoro, iyo ruvara rwe mint runogadzira kunzwa kwekugadzikana uye kugadzikana. Vagadziri vanowanzokurudzira kuishandisa mukati meimba yekutandarira. Uye zvakare, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti mukamuri rakadai nhengo dzese dzemhuri, pamwe nevaenzi, vanoungana pamwe nekunakidzwa kukuru. Uye mukana wekukakavara kana kukakavara uchaderera uye uchave mashoma.
Tinokupa zano kuti uverenge: Kushongedzera kwemaruva munguva dzezororo: maitiro mashomanana uye anoshanda
Asi zvakadaro, zvakawanda zvinoenderana nemashandisiro amungaita mint ruvara mukati meimba yemukati. Inotaridzika zvakanaka pamadziro semuvara wekutanga. Kuti uite izvi, unogona kusarudza mapepa emadziro ane anodhinda. Mafuta emadziro emadziro ane zvinyoro nyowani anotaridzika asina kunaka.
Kana iwe uchida sarudzo iyi, tinokurudzira kuti usarudze fenicha mune yebrown, chena kana beige shades. Ivo vanoonekwa sevanonyanya kubudirira mukati meimba yekutandarira. Nekudaro, kana iwe uchida kupenya uye kwakasimba kusanganisa, unogona kutenga sero yero kana yepinki. Ndiye uyo anozova wekutaura mune imwe kamuri.
Kugadzira kamuri kadiki kunowedzera kunetseka. Mushure mezvose, zvinodikanwa kuti zviite kuti zvive zvinoratidzika zvakakura. Ruvara rwemende rwakakwana kune izvi zvinangwa. Inotaridzika yakakura sarudzo apo ruvara rwemadziro, fenicha uye sofa zvinoenderana. Uyezve, hazvidikanwe kuti zvive zvakafanana, mimvuri yakafanana yakakwana.
Iwe unogona kudhonza chakadaro chemukati nemapira ane mavara, vase yemaruva kana machira. Ratidza fungidziro yako, uye ipapo imba yekutandarira ichataridzika ichishamisa.
Mint yekurara yekurara
Imba yekurara inzvimbo yakakosha paunofanirwa kunzwa kusununguka uye kuva nemukana wekuzorora zvakanaka mushure memazuva ekushanda. Naizvozvo, dhizaini yenzvimbo iyi mune mint ruvara mhinduro yakanaka. Mukamuri rakadaro, iwe zvechokwadi unowana simba.
Kazhinji, mumvuri uyu unoshandiswa kuvhara madziro. Ramba uchifunga kuti Wallpaper uye yekushongedza plaster semhedzisiro ichataridzika zvakasiyana. Naizvozvo, tinokurudzira kuti uenzanise izvi usati watenga zvinhu. Ificha mune iyi kesi, unogona kusarudza mumvuri unopesana. Semuenzaniso, chena, beige, grey uye brown zvinotaridzika zvinoshamisa.
Vanoda mint dzimwe nguva vanoedza kuishandisa sezvairi pese pese. Yokufukidza madziro, fanicha, mibhedha uye zvimwe zvakasiyana-siyana zvekushongedza. Ehe, iyi mhinduro inoratidzika inonakidza. Asi zvakadaro pane mukana wekuti uyu mumvuri unokurumidza kubereka iwe. Mhedzisiro iyi inowanzo kuitika kana paine rumwe ruvara rwakanyanya. Kuti udzivise izvi, tinokurudzira kusarudza mauto asina kwazvakarerekera ekugadzirwa kwemubhedha.
Tinokupa zano kuti uverenge: Zvigariro zvemukati zvekupenda
Makore eruvara urwu mukamuri yekurara anotaridzika kutsva uye akapfupi. Makanaka ekushongedza machira, machira akarara uye kunyangwe chigaro chepamusoro mune iri ruvara chinokwezva kutarisa. Iwe unogona zvakare kudhinda yako yaunofarira foto uye sarudza mint yemavara furemu. Izvo zvinokonzerwa nehunyengeri hwakadai kuti hwese hwepamuri yekurara hwakagadzirwa.
Ruvara rwependi mukicheni
Zviri mukicheni iyo mhuri inogara ichiungana kuzodya, kunwa tii uye kutaura kwepfungwa. Naizvozvo, iyo inofanira kuve yakajeka, yakagadzikana uye yakagadzikana sezvinobvira. Kuti ugadzire mamiriro akadaro, izvo zvinodikanwa kwete kungosarudza fenicha, asiwo kufunga kuburikidza nekubatanidzwa kwemavara. Kune urwu rudzi rwekamuri, zviri nani kusarudza akati wandei mimvuri.
Kazhinji, vagadziri vanokurudzira kusarudza kicheni-yemavara kicheni, asi usaite iyo mumvuri wakafanana wemadziro. Kusiyana nekamuri yekugara, mukicheni haizotarise zvakanyanya. Iyo kicheni-yemavara kicheni inotaridzika yakawanda inonakidza mukubatanidzwa nemachena masvingo, denga uye pasi.
Vaya vari kuenda kugadzira fenicha kuodha, unogona kuedza kuraira chimwe chinhu chisina kujairika. Semuenzaniso, sirivhi workstops mune mint kicheni set. Inotaridzika chaizvo inonakidza, nyowani uye nyowani.
Iyo kicheni yakakodzera kuedza uye kusawanzo kusanganisa. Mushure mezvose, iwe unogona kugadzira kamuri ine fenicha yekutanga haina kupindirana uye kuwedzera juicy accents. Semuenzaniso, mint yemavara emachira. Ivo vachakwezva kutarisa uye kunakidza vese vashanyi. Izvo zvisinganyanyi kunakidza ndeye yakajeka firiji mukicheni.
Stylish uye inonakidza mint ruvara ichave yakakodzera mune chero kamuri. Iyo inogona kushandiswa zvizere, kugadzira hwaro kana seanonakidza ma accents. Ratidza kufungidzira, kuyedza uye ipapo iwe zvechokwadi uchagona kugadzira iyo yemukati yemaroto ako.
Tinokupa zano kuti uverenge: Gingerbread House - nzvimbo iyo magilisi anorarama
Kune here ruvara rwemint mumba mako?
Unogona zvakare kufarira.
Maitiro ekushongedza kwemuti weKisimusi weGore Nyowani 2020: sarudzo dzinonakidza, pfungwa dzakanaka dzemafoto, pamwe nemhando dzemafashoni (58 mafoto)
Uye zvakare zororo rakanaka reGore Idzva riri kusvika, iro rinotarisirwa kwete nevana chete, asiwo
Zvigariro zvemukati zvekupenda
Kushongedza kunoita basa rakakosha mukugadzirwa kwemukamuri. Iishandise kugadzira mamiriro ekunze.
Pistachio ruvara rwemukati
Pistachio ruvara inogona nenzira yakakodzera kutaridzika seyakavanzika uye kunyange yakakosha mumvuri wekushongedza kwemukati.
Mapepa ane ruvara
Vashoma vanhu vanofunga nezve basa remaketeni mukati. Uyezve, vazhinji vanotenda kuti kwavo
Stencils for masvingo: zvakanakisisa pfungwa
Kugadzira kwete chete yakanaka, asiwo yakanaka dzimba ibasa remumwe neumwe wedu. Mushure mezvose
Mishonga inobatsira yemusha (makate, maoyiki, maruva, zvishongedzo, mifananidzo, nezvimwewo)
Kugadzira mamiriro anotonhorera mumba mako chiitiko chinonakidza. Nekubatsirwa kwezvinhu zvidiki zvakasiyana uye
Sevha zita rangu, email uye kero webhusaiti mune ino browser kune angu anotevera ekutaura.
© 2018-2020 Confetissimo - vakadzi blog
Kopa zvinhu zvesaiti zvinorambidzwa. Ruzivo rwuripo pane webhusaiti ndeye ruzivo ruzivo chete. Izvo hazvigone kutora chinzvimbo chekurapa kwakakodzera kurapwa. Iko kusarudzwa uye chinangwa chemishonga, nzira dzekurapa, pamwe nekutonga pamusoro pekushandiswa kwavo kunogona chete kuitwa nachiremba. Ive neshuwa kubvunza nyanzvi.